Mahhala VZW Msg. IVerizon Wireless manje isihlinzeka ngokuvuselelwa kwesoftware YAMAHHALA V CAST Video. Ukuze uthuthukise futhi uthuthukise ngokuphawulekayo isipiliyoni sakho somsebenzisi we-VCAST Video, iya ku-Get It Now -> Get PIX & FLIX-> Get New PIX -> Get New App -> Entertainment -> V CAST -> FREE Thuthukisa. Ukukhetha ukuphuma kuma-msgs wesikhathi esizayo, phendula ngo-'X '.
Uma noma ubani ebala, leyo inqubo yezinyathelo eziyi-7 yokuthuthukisa uhlelo lwe-VCAST.
Hhayi lokho kuphela - ukulandela imiyalo, kuzofanele ngiyibhale phansi noma ngiyibambe ngekhanda ngoba angikwazi ukuzulazula ekulayisheni ngaphandle kokuzula kude nomlayezo. Ukuphendula ngo-'X 'bekulula kakhulu. Noma ngubani ucabanga ukuthi kunethuba lapha lokuthi iVerizon ithuthukise ipulatifomu yabo?